ကျော်ရဲလင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ကျင်းပမည့် ကျောက်မျက်အချောထည်ပြပွဲတွင် ပြည်တွင်း ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းများက ပြခန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော် လာရောက်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ကုန်သည်များ၊ ကျောက်မျက်ဝယ်ယူ စုဆောင်းလိုသူများ တက်ရောက်ကြမည်ဟု ပြပွဲစီစဉ်သူများက ဆိုသည်။ “နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်တဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး သံမှုးတွေကနေတဆင့် ဖိတ်စာပေါင်း.
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လက်တွဲဖက်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဟု အမေရိကန်သမ္မတ ပြောကြား
ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် နှစ် ၇၀ မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ရာတွင် အမေရိကန်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လက်တွဲဖက်အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်နေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
Episode 12: အမျိုးသမီးများနှင့် လိင်အကြမ်းဖက်မှု
အမျိုးသမီးတွေအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကို ဘယ်လို ကူညီကာကွယ်ပေးရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒို့အသံက ဒီတစ်ပတ်မှာ ချဉ်းကပ် ရှာဖွေ တင်ဆက်ထားပါတယ်။
Episode 11: ကျောက်မီးသွေး၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး
အပတ်စဉ် ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ ဒို့အသံ အစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ လူ့အခွင့်အရေးက ပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲ ဆိုတာကို ဒို့အသံက ဆက်လက် တင်ဆက်ပေးမှာပါ။
ဆုမြတ်မွန်နှင့် သောမတ်စ် ကင်း(န်) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘဝ လုံခြုံမှုအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသရွေ့ ကျောက်ကျင်းတစ်ခုမှ ထုံးကျောက်များ ထုတ်ယူနေမှုကို ရပ်တန့်ရေးအတွက် ကရင်ပြည်နယ်တွင် အဝေးပြေးလမ်းတစ်ခု ဖောက်လုပ်နေသည့် တရုတ်ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးကို ဖိအားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) က ပြောကြားသည်။ ကျောက်ကျင်းမှ ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုကို ဒေသခံများက ဆန့်ကျင်နေသည့်အကြောင်း ရေးသားထားသည့်.
ဆုမြတ်မွန် နှင့် သောမတ်စ် ကင်း(န်) ရေးသားသည်။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖိုရမ်၏ ရလဒ်နှင့် စိန်ခေါ်ချက်များ
မကြာခင်ကျင်းပဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ တတိယအစည်းအဝေးကို စာတမ်းတင်သွင်းဖို့ ပြည်တွင်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပါပြီ။
အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ နှုန်းထားအား တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၄,၈၀ဝ သတ်မှတ်လိုက်ပြီး ကန့်ကွက်လိုပါက ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ကန့်ကွက်လွှာပေးပို့နိုင်ကြောင်း ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၃.